Raiisal qasaare Xasan Cali oo booqdey askar dhaawac: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raiisal qasaare Xasan Cali oo booqdey askar dhaawac: SAWIRO
Raiisal qasaare Xasan Cali ayaa booqdey askar ku dhaawacantey isqarxin argagixisada gaalaynta muslimiinta ay ka fuliyeen shalay deegaanka Awdheegle ee gobolka shabeelaha hoose. Ciidanka Danab ayaa halkaa ku diley dhiigmiirato badan oo welli meydkoodu yaalo goobta.
p style=”text-align: justify;”>Ra’iisul Wasaaraha ayaa maamulka Isbitaalka ka xog wareystay xaaladda caafimaad ee Ciidankii ku soo dhaawacmay weerarkaas, iyaga oo ku jira difaacyada ay ku leeyihiin degmada Awdheegle ee Gobolkaasi Shabeellaha Hoose.
p style=”text-align: justify;”>Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaariysay qorshe daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana booqashada Ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay qeyb ka tahay dadaallada lagula soconayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada laguna dhiirri gelinayo ciidamada qaranka oo dhan.
p style=”text-align: justify;”>Askarta isbitaalka ku jira oo qaba dhaawacyo fudud ayaa Ra’iisul wasaaraha uga mahadceliyay booqashada iyo dhiirri gelinta waxa ayna ballan qaadeen in marka ay soo bogsadaan ay si dhaqsa ah dib ugu laabanayaan furimaha dagaalka si ay qayb uga qaataan xoreynta dalka oo dhan.